टिचिङ्ग अस्पतालमा शल्य`क्रिया गर्न ठिक्क पारेकी ६ बर्षिया बालिकालाई कोरोना देखियो , स्वास्थ्यकर्मी नै त्र`सित ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/टिचिङ्ग अस्पतालमा शल्य`क्रिया गर्न ठिक्क पारेकी ६ बर्षिया बालिकालाई कोरोना देखियो , स्वास्थ्यकर्मी नै त्र`सित !
कपिल`व`स्तुकी ६ वर्षीया बालिकामा कोरोना संक्र`मण देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रा`लयका अनुसार वाण`गंगा नगरपालिका ४ ठाकुरापुर की ६ वर्षीया बालिकामा संक्र`मण देखिएको हो ।
स्वास`प्रस्वास सम्ब`न्धि समस्या देखिएपछि वडा कार्यालयको सिफारिस लिएर काठमाडौँ टि`चिङ्ग अस्पतालमा उपचार गराउन भर्ना भएकी थिइन् ।उनलाई स्वास`नलीमा मासु पलाएको देखिएका कारण शल्य`क्रिया गर्नु अगाडि सत`र्कताका लागि पी.सी.आर. परीक्षण गर्दा कोरोना पोजि`टिभ रहेको पाइएको हो ।
वडा कार्यालयको सिफारिस लिएर काठमाडौँ टिचिङ्ग अस्पतालमा उपचार गराउन गएको समयमा चिकित्स`कको सुझाव`अनुसार स्वाब परीक्षण गराउँदा संक्र`मण पु`ष्टि भएको हो । उनी`हरू उपचारका लागि मंगल`बार काठमा`डौँ आएका थिए । घरमै बसि`रहेकी ती बालि`कामा कसरी संक्र`मण देखियो भन्ने खु`ल्न सकेको छैन।
शल्य`क्रिया गर्नका शि`क्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएकी बालिकामा कोरोना पोजि`टिभ देखिएकपछि अहिले त्यहाँ का`र्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्य`कर्मी, कर्मचारी, अन्य बिरामी तथा तिनका कुरु`वाहरु त्र`सित भएका छन् ।
बालिकामा संक्र`मण देखिए`पछि उनी`सँग सम्पर्कमा आए`काहरूको खोजी गरि प`रीक्षण गर्ने तयारी भइ`रहेको छ । आज बिहा`नै नेपालमा सात जना कोरोना सङ्क्र`मित थपिएका छन् । सर्ला`ही, ध`नुषा, महो`त्तरी, काठमाडौं र कपिलब`स्तुमा गरी बिहीबार ७ जना कोरोना सङ्क्र`मित थपिएका हुन् । यो सँगै सङ्क्र`मितको सङ्ख्या“ २५० पुगे`को स्वा`स्थ्य तथा जनसं`ख्या मन्त्रालय`ले जनाएको छ ।
भारतबाट आएकाहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नुको साटो तास र मदिरामा मस्त!
आजदेखि अनिश्चितकालका लागि सबै सेवा बन्द
आइ जी पी बने लग त्तै निर्मला काण्ड टुं गो लगाउन क स्सिए शैलेश थापा
वैज्ञानिकहरुले फेला पारे कोरोना भाइर`सलाई शरीरमा फैलि`नबाट रोक्ने एन्टि`बडी !
भर्खरै आयो काठमाडौं बाट नसोचेको दुःखद खबर,कोलहाल मच्चाउने र आउने दिनमा लक डाउन नि’श्चित !